သင့်လုပ်ငန်း Domain အမည်ရှာရန်:
Web Folio များ
Email Address (အီးမေးလ်):
မင်္ဂလာပါ။ WEB & MOBILE BUILDERS များဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင် WEB တည်ဆောက်ပါ။
ရိုးရှင်းသော ပုံစံများ နှင့် အတူ လွယ်ကူ စွာ ပြုပြင်နိုင်၏။
WEB MASTER သည် JAPAN နိုင် ငံ၏ REIWA နှစ်နှင့် အတူရှင်သန် ထ မြောက်ခဲ့သည်။
Web Master ဝန်ဆောင်မှုမှ အထူးကြိုဆိုပါတယ်။
မြန်မာငွေ လစဉ်ကြေး ၁၅,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် အခုပဲ Unlimited Web Page နှင့် Emails များ ကို ယူပါ။
BUY NOW with WAVE MONEY
Call 09-9-53000-771 / 09-9-53000-772
Web Master Company ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် တွင် Japan နိုင် ငံ၏ Reiwa နှစ်နှင့်အတူ တည်ထောင်ခဲ့သည်။Japan နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ပင် Nippon Stars ဟူသောအမည်ဖြင့် Website နှင့် Digital Marketing များကို ဆောင် ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် MSI Web Team အ နေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် တွင် May Stars International Co., Ltd အ နေဖြင့် လုပ် ဆောင် ခဲ့သည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် တွင် MSI Web Team သည် Web Builder များနှင့်အတူ Web Master Company အသစ်ကို စတင်ခဲ့သည်။
သမိုင်းနောက်ခံ ၂၀၁၃ မှ စပြီး ကျွန်မ တို့သည် Japan, Thailand, Malaysia, South Africa နှင့် နိုင်ငံတကာမှ Website များကိုတည်ဆောက် ရောင်းချခြင်း နှင့် အတူ Domain / Hosting ဝန်ဆောင်မှုများကို အများနှင့် မတူအောင် စီမံဆောင် ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ယခု အချိန် သမယ တွင် မြန်မာ နိုင်ငံမှ ထူး ချွန်သူ နှင့် လုပ် ငန်း ရှင် များ ၏ တောင်းဆို မှု များကြောင့် ပြည် တွင်း Company အ နေဖြင့် IT လုပ်ငန်း ဆိုင် ရာ ဝန် ဆောင်မှု များကို အ ကောင် အထည် ဖော် ဆောင် နေ သည်။
ဝယ်ယူသူအားလုံးအတွက် အ ကောင်းဆုံးသော ဝန် ဆောင် မှု နှင့် အတူ လူကြီးမင်းတို့လုပ် ငန်း များကို ရလဒ် အ ပေါင်း ကို ရည်ရွယ် ကာ ဆောင် ရွက် ပေး နေ သည်။ ဒါ အပြင် ဝယ်ယူသူအများ၏ လိုအပ်ချက် အရလည်း ERP, CMS systems, CRM and E-Commerce sites ကို အထူးပံ့ပိုးဆောင်ရွက် လုပ် ကိုင် ပေး နေ ပါ သည်။
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အလှပဆုံးသော နည်းစနစ်တို့ဖြင့် တင်ပြခြင်း
Web Master ၏ အသင့်တည်ဆောက်နိုင်သော စနစ်
Web Master Builder သည် ဝယ်ယူသူ အားလုံးအတွက် အလွယ်တကူနှင့်အဆင်သင့်သုံး Builder ဖြစ် ပါသည်။ “Everyone can build Web” “လူတိုင်း Web တည်ဆောက် နိုင်သည်။” ဆို သော ကျွန်မတို့၏ ဆောင်ပုဒ် အတိုင်း အ ကောင်းမွန် အထိရောက်ဆုံးသောနည်းလမ်းစနစ်များ ဖြင့် ဝယ်ယူသူ အားလုံးကို ဝန် ဆောင် မှု ပေး လျှက်ရှိပါသည်။
ကျွန်မတို့Design များသည်တူမတူဘဲ လူတိုင်း လွယ်ကူ စွာ Web တည်ဆောက်နိုင်သည်။ များပြားစွာသော ready-made Designs ပုံစံ Templates များနဲ့အတူ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျှော်သော ပုံစံ ဒီဇိုင်းကို ရွေးခြယ် နိုင် ပါပြီ။
မည်သည့် Web ကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို၏ Engineers များ က Develop လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါသည်။ ဘာသာစကားပေါင်းစုံနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး လူကြီးမင်းဝယ်ထားသောဝန်ဆောင်မှု အတွက် ကျေနပ်စိတ်ချမ်းသာသည်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးမှာပါ။
ကြော်ငြာ (သို့) Digital Marketing
ယ နေ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် Digital Marketing သည် အဓိက ကျသော နေရာတွင် ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဝယ်ယူသူအားလုံးကို Digital Advertising စနစ်များစွာဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့၏ company profits နှင့် အကျိုး အမြတ်အားလုံးသည် Web Master ၏ ဝန်ဆောင်ခ အပြင် များစွာ သော ရေရှည် စီးပွား ရေး အကျိုး အမြတ် များ ဖြစ် ထွန်း ကြ ပါ သည်။
Support (သို့) CSD အဖွဲ့
Web Master ၏ CSD team သည် ဝယ် ယူထားသော ဝန် ဆောင်မှု အားလုံး အတွက် အချိန် နှင့် တပြည်းညီ ကူ ညီ ကြ ပါ တယ်။ ဖြစ်ပေါ် လာ သော စိတ် ခေါ်မှု အရပ်ရပ် ကို လျှင်မြန် စွာ ဖြင့် အ ကောင်း ဆုံးသော ပညာရှင်များ ပီသစွာ လူကြီး မင်းတို့စိတ် ကျေနပ် သည် အထိ ကူ ညီ ဆောင် ရွက် ပေး မှာ ဖြစ် ပါ သည်။
အချို့ သော ပျော်ရွင် စွာ ဖြင့် ဝယ် ယူ ထား သူ Clients များ
‘I’macustomer of MSI web team since 2017 and we are very happy to be working with them. Our Website is the proof of their team effort.’
Dr. Hla Minn Sein
‘We had met many website support teams and could not satisfy the services in terms of costs and payback values. Web Master has this solution easy resolved and we will be their long-term client as always.’
Ko Kyaw Kyaw Naing